China Polyquaternium-11 ifektri abakhiqizi | I-Y & R.
I-Polyquaternium-11 iyi-copolymer ene-quaternized ye-vinylpyrrolidone ne-dimethyl aminoethylmethacrylate,
isebenza njenge-ejenti yokulungisa, ukwakha ifilimu nokulungisa isimo. Inikeza ukuthambisa okuhle kakhulu ezinwele ezimanzi kanye nokulula kokukama nokuncipha kwizinwele ezomile. Yakha amafilimu acacile, angenabumba, aqhubekayo futhi asiza ukwakha umzimba ezinweleni ngenkathi ishiya ikwazi ukulawulwa. Ithuthukisa ukuzwa kwesikhumba, inikeze ubushelelezi ngesikhathi sokufaka isicelo kanye nokulungiswa kwesikhumba. I-Polyquaternium-11 iphakanyiswa ukuthi isetshenziswe kuma-mousses, ama-gel, izifutho zesitayela, izitayela ezintsha, izithambisi zokulungiselela ukushiya, ukunakekelwa komzimba, izimonyo zombala, nezicelo zokunakekelwa kobuso.
Ikhodi yomkhiqizo: YNR-PQ11
Igama le-INCI: I-Polyquaternium-11
Inombolo ye-CAS. 53633-54-8
I-Molecuar Formula: C18H34N2O7S
I-Polyquaternium-11ngusawoti we-polymeric quaternary ammonium owenziwe ukusabela kwe-diethyl sulfate kanye ne-copolymer ye-vinyl pyrrolidone ne-dimethyl aminoethylmethacrylate. Kusekilasini lamakhemikhali elaziwa ngokuthi ama-quaternary ammonium compounds (ngokuvamile abizwa nge- “Quat”).I-Polyquaternium-11 Isixazululo se-aqueous high viscous, Miscible ngamanzi ne-ethanol, Iphunga elincane lesici.I-Polyquaternium-11 iyifu, ifilimu enombala wotshani eyayiqala ne-anti-static agent.Isebenza njenge-agent yokulungisa izinto futhi eyake yenziwa ifilimu, eyisitayela esisizayo.
Ukubukeka Sula kuketshezi oluncane lwe-viscous viscous
Okuqukethwe okuqinile 19 ~ 21%
i-pH Value (njengoba injalo) 5.0 ~ 7.0
I-N-Vinylpyrrolidone 0.1% ubukhulu.
I-viscosity (# 3, @ 6rpm, 25 ℃) I-20,000-60,000 cps
Izicelo:I-Polyquaternium-11 inikeza izinzuzo ezikhanyayo, ezinciphisayo nezisusa ukufafisa kuma-conditioner ezinwele kanye nama-shampoo ngokugqokisa izinwele kwifilimu ecacile engeza ivolumu ebonakalayo nejabulisayo.
I-Polyquaternium-11 iyinhlanganisela ye-quaternary ammonium eyenza amafilimu aguquguqukayo anenzuzo yokubeka isimo esincane ekuhlanzeni nasekusebenziseni izitayela.Sebenzisa njenge-agent yokulungisa ama-shampoos nokhilimu noma usule ama-conditioner we-rinse. Inikeza ukuphazamiseka okusheshayo ngenkathi ungeza ivolumu nomzimba ezinweleni. Kwenza izinwele kube lula ukuzikama.Isebenza ikakhulukazi emikhiqizweni yokwenza izinwele, kufaka phakathi ukufafaza kuma-conditioner kanye ne-detanglers. Kuhle kakhulu ukusetshenziswa nge-blow drying kanye ne-straighteners lapho ingahlinzeka ngokuvikelwa okushisayo kwezinwele.I-Polyquaternium-11 ingasetshenziswa kwimikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba futhi nokuzizwa kwesikhumba okuthuthukisiwe. IPolyquaternium-11 isebenza kahle emikhiqizweni yokushefa, okhilimu besikhumba namafutha okugcoba, insipho engamanzi nemigoqo yensipho.
I-Polyquaternium-11 isetshenziselwa ukunakekelwa kwezinwele njengama-mousses, ama-gel, izifutho zepompo nama-spritzes. Isebenza njenge-ejenti yokulungisa isimo kanye nefilimu yangaphambili. Inikeza izici ezinjengokubaluleka, ukukhanya nokulawula Kusetshenziswa ekunakekelweni kwezinwele njengama-lotion, ama-mousses, ama-gel, izifutho, ama-shampoo, ekunakekelweni kwesikhumba njengezinsipho, ukushefa igwebu nokugcoba umzimba. Isebenza njengesilungisi nesitayela esisizayo. Izipocesses zePolyquaternium-11 ziyasabalala, ukushaja kwe-electrostatic ukuvimba nokugcoba izakhiwo. Inikeza izinzuzo kufaka phakathi i-lather ezinzile, amandla amakhulu, ukuhlangana okumanzi, ukuthamba, ukubamba, ukuzwa okubushelelezi nokuzizwa kwesikhumba esisilika.
I-Polyquarternium-11 lapho isetshenziswa kumkhiqizo ophuphumayo njengeshampu noma ijeli leshawa izothuthukisa amazinga e-foam. I-Polyquaternium-11 iyahambisana nama-non-ionic, anionic nama-amphoteric surfactants kanye ne-rheology modifiers. I-Polyquaternium-11 inhle kakhulu uma ihlanganiswe ne-carbomer ukukhiqiza ama-gels abushelelezi futhi asetshenziswe kalula.I-Polyquaternium-11 ingakhuphula ukuzinza kwamafomula asuselwa ku-surfactant, ukhilimu kanye ne-lotion.
IPolyquaternium-11 inikezwa njengoketshezi olubonakalayo, noma inikezwe ngembiza ukuze isetshenziswe kalula njengoba uketshezi lukhulu kakhulu. Ukufudumala ngobumnene kungasiza ekusetshenzisweni kokubumba.I-Polyquarternium-11 ichitheka kalula emanzini ngakho-ke kulula ukuncibilika ungene esigabeni samanzi sokwakheka. Uma isetshenziswa ekwakhiweni okususelwa kuma-surfactant siyeluleka ukufaka i-Polyquaternium-11 ngaphambi kwama-surfactants ukuze kube lula ukusabalalisa. I-Polyquatenrium-11 iyakwazi ukubekezelela ukushisa.
Olandelayo: I-Keratin ene-Hydrolyzed
China Polyquaternium 11 ifektri